အထူးကုခွဲစိတ်ဆရာဝန် အဖြစ် ရာထူးတိုးမြင့်ခန့်အပ်ခြင်းခံရတဲ့ ဒေါက်တာမြဝတ်ရည် - MM Live News
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၈ ရက်၊ ရွှေပြည်သာ မီးသတ် စခန်းရှေ့တွင် ကားရပ်တန့်ခဲ့သည်ဟုဆိုကာ အချင်းများခဲ့ရာမှ မီးသတ်ဌာနနှင့် အပြန် အလှန်တရားစွဲခဲ့သော ထန်းတပင် အလုပ် သမားဆေးရုံကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်အား လက်ထောက် ဆရာဝန်(ခွဲစိတ်)မှ အထူးကုဆရာဝန် (ခွဲ စိတ်)အဖြစ် ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်အပ်ခြင်းခံ ရကြောင်း ၄င်းထံမှသိရသည်။
ရွှေပြည်သာ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့စခန်းမှ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှူး ဦးသွင်ယုနိုင်နှင့် ယာဉ်ထိန်း တပ်ဖွဲ့စုမှ ရဲအုပ်သက်နောင်တို့က တရားလို ပြုပြီး ဆရာဝန်အမျိုးသမီးအား အရေးယူပေး ရန်တိုင်ကြားမှုကြောင့်….
ရွှေပြည်သာ မြို့မရဲ စခန်းက ဆရာဝန်အမျိုးသမီးအား (ပ) ၁၈၄၁ /၂ဝ၁၉ နိုင်ငံသားများ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် လုံခြုံမှုကာကွယ်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ-၁ဝ ဖြင့်လည်းကောင်း၊
(ပ)၁၈၄၂/ ၂ဝ၁၉ ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ-၆၆(ဃ)ဖြင့်လည်းကောင်း၊ (ပ) ၁၈၄၃/၂ဝ၁၉ မော် တော်ယာဉ် ဥပဒေပုဒ်မ-၆၅ ဖြင့်လည်းကောင်း အမှုဖွင့်ထားပြီး ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်က လည်း အပြန်အလှန် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ရဲ မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။WYHW Credit – YangonMediaGroup
ရနျကုနျ၊ ဇှနျ ၈ ရကျ၊ ရှပွေညျသာ မီးသတျ စခနျးရှတှေ့ငျ ကားရပျတနျ့ခဲ့သညျဟုဆိုကာ အခငျြးမြားခဲ့ရာမှ မီးသတျဌာနနှငျ့ အပွနျ အလှနျတရားစှဲခဲ့သော ထနျးတပငျ အလုပျ သမားဆေးရုံကွီးတှငျ တာဝနျထမျးဆောငျနသေညျ့ ဒေါကျတာမွဝတျရညျအား လကျထောကျ ဆရာဝနျ(ခှဲစိတျ)မှ အထူးကုဆရာဝနျ (ခှဲ စိတျ)အဖွဈ ရာထူးတိုးမွှငျ့ခနျ့အပျခွငျးခံ ရကွောငျး ၄ငျးထံမှသိရသညျ။
ရှပွေညျသာ မီးသတျတပျဖှဲ့စခနျးမှ မီးသတျတပျဖှဲ့မှူး ဦးသှငျယုနိုငျနှငျ့ ယာဉျထိနျး တပျဖှဲ့စုမှ ရဲအုပျသကျနောငျတို့က တရားလို ပွုပွီး ဆရာဝနျအမြိုးသမီးအား အရေးယူပေး ရနျတိုငျကွားမှုကွောငျ့
ရှပွေညျသာ မွို့မရဲ စခနျးက ဆရာဝနျအမြိုးသမီးအား (ပ) ၁၈၄၁ /၂ဝ၁၉ နိုငျငံသားမြား ပုဂ်ဂိုလျရေးဆိုငျရာ လှတျလပျခှငျ့နှငျ့ လုံခွုံမှုကာကှယျရေး ဥပဒေ ပုဒျမ-၁ဝ ဖွငျ့လညျးကောငျး၊
(ပ)၁၈၄၂/ ၂ဝ၁၉ ဆကျသှယျရေး ဥပဒပေုဒျမ-၆၆(ဃ)ဖွငျ့လညျးကောငျး၊ (ပ) ၁၈၄၃/၂ဝ၁၉ မျော တျောယာဉျ ဥပဒပေုဒျမ-၆၅ ဖွငျ့လညျးကောငျး အမှုဖှငျ့ထားပွီး ဒေါကျတာမွဝတျရညျက လညျး အပွနျအလှနျ အမှုဖှငျ့ထားကွောငျး ရဲ မှတျတမျးမြားအရ သိရသညျ။WYHW Credit – YangonMediaGroup
ဆေးခပ်ပြီး ၁၁ ရက်ကြာ ခိုးယူ မတရားကျင့်ခံရခြင်း….
May 15, 2019 MM Live